Russia inotyisidzira Google neApple pamusoro pe 'zvisiri pamutemo mabasa eRussia'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Russia inotyisidzira Google neApple pamusoro pe 'zvisiri pamutemo mabasa eRussia'
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Entertainment • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Russia inoshevedza Google neApple pamusoro pe 'zvisiri pamutemo zviitiko zveRussia'
Mumakore apfuura, "vapikisi vekunze uye nzvimbo dzinoshanda mukurwisa chiRussia dzaiedza chaizvo kushandisa nguva ino [pamberi pesarudzo] kuitira kusimudzira vanhu, vavakange vakamira," kusanganisira nekushandisa ruzivo rwekupedzisira rwecomputer. .
Russian Senate Commission inoda kutaura neApple neGoogle nezve 'zvisiri pamutemo' zviitiko
Kutora chikamu mumusangano kuchabvumidza Apple neGoogle kuti 'vanzwisise zvinoreva zvirevo zveRussia,' akadaro Seneta Klimov.
Kune 'mienzaniso yakakomba yekutyorwa kwemutemo weRussia' neUS tech giants, anodaro Klimov.
Vakuru kubva kuGoogle neApple vakakokwa kuti vasangane neRussia Federation Council's Interim Commission yeKudzivirirwa kweHurumende Hutongi uye Kudzivirirwa kweKupindirana muZvemukati menyika kuti vakurukure 'mienzaniso yakakomba yekutyorwa kwemutemo weRussia nemakambani epamhepo epamhepo anowanikwa iyo US '.
Sénata Andrei Klimo v
“Takoka vamiriri vepamutemo ve Google uye apuro kumusangano wemangwana (Gunyana 16) wekomisheni. Rutivi rweRussia rine mibvunzo yakawanda yekubvunza. Tinotarisira kuti panosvika 10 am (musi waGunyana 16) vachapa mhinduro, ”Sachigaro wekomisheni iyi, Senator Andrei Klimov vakadaro.
Sekureva kwaSenator Klimov, iro Ministry yeRussia yekune dzimwe nyika, iyo Central Election Commission, Hofisi yeMuchuchisi wePublic uye Rashiya'Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies, uye Mass Communications vakakokwawo kumusangano uyu.
Klimov akataura kuti semakore apfuura, "vapikisi vekunze uye nzvimbo dzinoshanda zvakanyanya pakurwisa chiRussia dzaiedza chaizvo kushandisa nguva ino [pamberi pesarudzo] kuitira kusimudzira vanhu, vavakange vatya," kusanganisira nekushandisa iyo yazvino komputa tekinoroji.
“Panyaya iyi, pane mienzaniso yakakomba yekutyorwa kwe Rashiyamutemo nemakambani epasirese epamhepo anowanikwa muUS, ”mukuru wekomisheni akadaro.
Sekureva kwaKlimov, Google neApple kutora chikamu mumusangano wekomisheni kuchavatendera kuti "vanzwisise kukosha kwezvakataurwa neRussia." Mumwe musangano wekomisheni iyi, seneta wakati, uri kuzoitika mushure mesarudzo dzenyika, musi waGunyana 21.